Wholesale CCTREE fekitori dzakasiyana MAX-PLA (PLA +++) 3D purinda filament neyakajairwa, maindasitiri giredhi PLA Mugadziri uye Mutengesi | CCTREE
CCTREE fekitori akasiyana MAX-PLA (PLA +++) 3D purinda filament neyakajairwa, maindasitiri giredhi PLA
1. simba rakakwirira, kukwirira kwakasimba, kuomarara kwakanyanya.
2. kakapetwa kagumi pane zvakajairwa PLA.
3. Kutonhora kutonhora, pasi -25 ℃, zvichiri kuramba zviri nani kuomarara.
4. Mushure mekuvhurika, hapana chikonzero chekuvharirwa, pasi pemvura yakanyorovera inogona kuiswa kwemwedzi gumi nemaviri, uye haizokanganisa kudhinda zvakanyanya, asi inofanirwa kuchengetedzwa kure neguruva.
5. Viscidity, kakapetwa ka5 pane zvakajairika PLA, hapana chikonzero chekupisa hotbed, inogona kudhindwa zvakananga.
6. mushure memwedzi gumi nemaviri, kuomarara hakushanduke zvakanyanya, kudhinda maitiro kunoramba kwakanakisa.
7. nyudza mumvura kwemwedzi miviri, uchingokumbira kukwegura.
8. Stable Melting Point, inoyerera mushe, Smooth yekudhinda pamusoro, uye haizovhuna filament panguva yekudhinda.
9. Nguva yekuchengetedza: 1 ~ 3 makore.
Kushivirira: ± 0.03mm
Dhayamita: 1.75MM / 2.85MM
Kurema kweNet: 1KG, 3KG, 5KG
Kamwene Tembiricha: 190˚C - 230˚C
Yekumhanyisa Yekumhanyisa: 40mm / s - 60mm / s
Kupisa Kwemubhedha: 25˚C - 60˚C
Pasuru: Brown Bhokisi + Yepasi Bhegi Ine Desiccant
Zvitsva mbishi zvigadzirwa PLA 4032D inotengeswa kubva kuUSA naturaworks ingeo.
Sezvo PLA iri nyore kuve yakapfava, MAX-PLA iri nyore kusimba-kudhinda filament ine yakagadziriswa michina zvivakwa, ichiita iyo yakanakisa imwe nzira kune ABS. Inoshanda zvakakwana nevakawanda veFDM 3d maprinta pamusika, senge Chisikwa MK3, Ender 3, Monoprice FlashForge, QID, nezvimwe.
Kubatsira kweCCTREE MAX-PLA
Pashure: CCTREE Yakakwira Hunhu 3d HIPI filament 1.75MM / 2.85MM 1kg 3d printer filament 1 KG HIPS 3d Plastic filament Yakaderera c, kunhuhwirira kushoma pane ABS
Zvadaro: Metal PLA 1.75mm 3D Printer Filament 1Kg Simbi Texture Mhangura Bronze Metallic PLA
Pla Max, Polymax Pla